September | 2012 | Aung Ko Htwe Personal Website | Page 2
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေး [ဒုတိယအကြိမ် … ] -keep the nature ****************************** အခြေခံ(၃)ချက် …၂၀၀၉ ရေး -လမ်း -မီး -ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း ******************************
Liverpool Vs Man u Liverpool ball possession …take place position … Man U attacking Man city Vs Arsenal ********************************* Hanburg Vs dordmond Wonderbremin Vs Stigart ********************************* Udinese Vs Ac ********************************* deportivo Vs Sevilla Betic Vs Espanyol **********************************
Champion League First match / Important atleast draw … Bayearn Munich Vs Valencia Chelsea Vs Juventus Real Vs Man city two teams midfiels prepare needs man city midfield + back
new album looking4myself ************************** looking /megan /record /new friendship new look / dakota fanning **************************4B … me/tetto တက်တူးလိပ်ပြာ ဆိုတောဲ့ပြန်စစ်ကြည့်ရမှာလား …ဟားဟား အကြောင်းရှာနေတာ …ဟားဟား **************************
Kim Yu Na Glove / လက်အိပ် / Hand sleeping /Sex with hand ဘယ်သူ့အတွက်ရိုက်ပေးတာလဲ … ပါး… ဝေးလို့လား … ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပါပဲ … blouse ..အကျီ …ယုလပြည့် B … သီချင်းတော့ပို့ဖြစ်တယ် … ထူးအိမ်သင် …လရောင်အောက်လမ်းလျှောက်ချင်တယ် …
New Tv series doctor champ လက်အိပ် / glove /hand sleeeping /sex with hand ရိုင်းသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါနော် … ********************************** ချန်ပီယံ ဗျ … ပီကိုမသုံးပဲထားတာ … champ …အခွင့်အရေးကို သုံးထားလား …7c c က sex နဲ့ပတ်သက်ရင် အစမခံရဘူး … တွဲသွားတွဲလာ ပေါ့ …မင်း … house 67 thandar Soe …5 … Continue reading →
Princess William and Kate middleton လက်မထပ်မီကပုံ 67 ************************************* မဆိုင်တာကို ဗိုက် စရင်သန္တာက စိတိမဆိုးဘူး … ညော်တယ်လို့ပဲ ထင်တာ … နီးစပ်တာ ကျော်နဲ့စရင် အထင်ခံရမှာစိုးတယ်ဗျ … ကြုံရင်ကြုံသလို ငြင်းတယ် … စိတ်ဆိုးတယ် … စာရေးတာဝါသနာပါတယ် … ************************************* ဗိုက် ကိုစအချက်ပြတုံးက ကောင်းတာဗျ … သူများယူသုံးလိုက်မှ တမျိုးဖြစ်သွားတာ …. တောင်ငူမှာစသုံးတာ … အချက်ပြတာအဆင်မပြေရင် လည်းလွဲတတ်တယ်ဗျ … … Continue reading →
Taylor swift new single we are ever never getting back together back to december … not two …Mya and Thander soe ? …Only one ? two House doctor … thander soe sing …သီချင်းဆို … မြလေးက …အောင်ရင် အလံဖြူလေးပြဖို့လိုပြီ …သီချင်းကြိုက်တယ် … သံချည်းရေးတယ်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ … Continue reading →
2010 movie 67 … ကြယ်သီး … တကယ်အဖြစ်နဲ့ရောထားတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုလေးပေါ့ … ကော်လံကထောင် … ******************************************** အနုပညာရှင်တွေတောင်ဖန်တီးမှုတွေ။ကောလဟာလတွေကို တင်းခံရတော့ …တချို့ ..စိတ်ဝင်စားတဲ့အခါစိတ်ဝင်စားပြီး တချို့ ဟာလေးတွေ …ခံနိုင်ရည်မရှိမှာစိုးလို့ …စိုးရိန်လို့ … လုပ် .. တို့ဘာတို့ကြအေးဆေးပဲလေ … ရေးပြရတာပါ …ဖန်တီးမှုကတစ်ပိုင်းပေါ့ … ဟိုတစ်နေ့ကတော့ ကလေးနဲ့တွေ့တာအေးဆေးပါပဲ … ********************************************* ၂၀၀၅၊၂၀၀၆ ..B …တွဲသွားတွဲလာ …ကြာတယ် … ၂၀၀၇ …ဖူး …ဖက်လို့ကောင်းတယ် ..ဟီးဟီး … Continue reading →
France president Franco Hollande and germany chancellar Angella merkel **************************************** august 26/27/28 ကြယ်သီး …67…5 … ****************************************